Maitiro ekuona, kukanzura kana kushandura kunyorera kwako kubva kuApple TV | IPhone nhau
Maitiro ekuona, kudzima, kana kushandura kunyoreswa kwako kubva kuApple TV
Jordi Gimenez | | Apple tv, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Imwe yesarudzo dzatinadzo kubva kumidziyo yese yeApple ndeyekutarisa, kuchinja kana kudzima kunyorera kune akasiyana masevhisi atakabvumirana. Iyi sarudzo zvinogona kuitwa kubva ku iPhone, iPad, Mac uye zvakare kubva kuApple TV.
Nhasi tichaona maitiro ekuzviita kubva kuApple set set bhokisi repamusoro. Iyo chaizvo yakafanana nenzira yatingaite nayo kubva kune chero chinhu chishandiso asi zviri pachena kuti ine nhanho dzakasiyana kana zvasvika kune tvOS. Tichaona maitirwo atingaite chiito ichi nyore uye nekukurumidza.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuchengeta mupfungwa ndechekuti Apple TV yechitatu chizvarwa kana yapfuura haigone kuita maitiro aya, saka tichazoda chimbo cheIOS, Mac kana PC kuti tikwanise kuita manejimendi ekunyorera. Mune inotevera Apple TV modhi isu tinoteedzera aya matanho:
Isu tinovhura iyo Zvirongwa uye isu tinowana iyo sarudzo Accounts. Mariri tinofanira tinya nezvechisarudzo Subscriptions uye tinya pa Manage kunyorera kuwana ma subscriptions akasiyana atakasangana neApple ID yedu.
Iye zvino tave kuwana kunyoreswa uye isu tinogona kuita chero basa pasina dambudziko. Kana paine chikonzero chero chipi zvacho kunyoreswa kwacho kusingaonekwe mune zvinyorwa Zvinogoneka kuti izvi hazvigone kutarisirwa kubva pachinhu ichi uye uchafanirwa kuzviita kubva ku iPhone, iPad, iPod touch, Mac kana PC kuti uchichinje, kukanzura, nezvimwe. Muzviitiko izvi chikonzero kazhinji ndechekuti Apple haigadzirise kubhadharisa saka haina kuoneka zvakananga mune runyorwa rwekunyoreswa kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuona, kudzima, kana kushandura kunyoreswa kwako kubva kuApple TV
Nei vasingataure zvakawanda nezve jailbreak? Ndakasangana neiri peji makore mashoma apfuura ndichitsvaga iyo mhando yeruzivo uye yaibatsira kwazvo, asi kwenguva yakareba ini handina kuverenga chero chinhu nezve nyika yejerebreak uye mazuva mashoma apfuura yakabuda kune ios 12.1.1
Zvakanaka, nekuti yatove kufarira vashoma, ichokwadi chinosuruvarisa
Usatombo kunetseka, iwe uri mukana wekurasa yako iPhone pane zvakabiwa kana kubiwa.
Microsoft Edge yeIOS inotibvumidza isu kuti tishandure mapeji ewebhu